Home Wararka (Deg Deg) Qarax xooggan oo gilgilay magaalada Nairobi (Sawiro iyo Video)
(Deg Deg) Qarax xooggan oo gilgilay magaalada Nairobi (Sawiro iyo Video)
Qarax aad u xoog badan ayaa goor dhaweyd ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Qaraxa oo ka dhacay xaafadda Westland ayaa geystay qasaare isuga jiro dhaawac iyo dhimasho.
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Booliska kenya aya goobta mar dhow soo gaaray. Lama oga cidda ka danbeysa balse dadka ayaa isla dhex maraayo in ay Shabaab Qarax ka sameeyeen Nairobi.
Wixii soo kordho goor dhow naga filo